April, 2017 | Otu Di na Nwunye
April 29, 2017 + Caribbean, Ozi ndị a, Puerto Rico, Nhazi njem
Ọ bụ Tito Mendez, onye Puerto Rican na onye na-eme njem njem, dere Rico, Puerto Rico. Enwere ike ịchọta ọkwa profaịlụ mgbasa ozi nke Tito ebe a. Puerto Rico dị mfe n'elu ebe kachasị amasị m ileta. Nyere na enwere m aka n'ebe ahụ anaghị eme m ka ọ bụrụ enweghị mmasị, ma ọ na - eme m ka m chee - olee otu ị ga - esi bie ebe ụfọdụ maka ọtụtụ n'ime ndụ gị ma ... GỤKWUO
April 21, 2017 + Di na Nwunye, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Spain
Mma nke Barcelona bụ bejeweled na multi-faceted. N'etiti ọtụtụ ụlọ ngosi ihe nka na ụlọ Gaudi, n'okporo ámá ndị na-eduga gị n'ụtụtụ ahịa kọfị ụtụtụ na bocadillos na-echere ndị ahịa n'oge elekere ise nke ụtụtụ, gaa na bistros nke mbubreyo ehihie ahụ na akwụkwọ Estrella Damm ị na-achọ (Limon flavored, n'ezie!) obodo a ifufe ya ụzọ gburugburu ... GỤKWUO